Hill Climb Racing 1.42.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.42.3 လြန္ခဲ့ေသာ5ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ၿပိဳင္ပြဲ Hill Climb Racing
Hill Climb Racing ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
တွေ့ဆုံနယူတန်ဘီလ်, ထိုလုလင် aspiring ကုန်းတက်ပြိုင်ကားသမား။ သူအဘယ်သူမျှမစီးအစဉ်အဆက်မတိုင်မီခဲ့ဘယ်မှာမှသူ့ကိုယူမယ့်ခရီးဖြင့်စတင်နိုင်ရန်အကြောင်းပါ။ Ragnarok ကနေနျူကလီးယားစက်ရုံမှ, ရှိသမျှသောအရပ်တို့ကိုမဘီလ်တစ်ခုပြိုင်ကားလမ်းကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ သူကလပေါ်အမြင့်ဆုံးတောင်ကုန်းကိုတက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးသည်အထိရူပဗေဒ၏ဥပဒေများအနည်းငယ်သာလေးစားမှုနှင့်အတူဘီလ်ငြိမ်ဝပ်စွာနေမည်မဟုတ်!
အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောကားများနှင့်အတူပတ်ဝန်းကျင်မှာတက်ပြီးထူးခြားတဲ့တောင်ကုန်း၏စိန်ခေါ်မှုများရင်ဆိုင်နေရသည်။ ရဲလှည့်ကွက်ကနေဆုကြေးငွေရဖို့နဲ့သင့်ရဲ့ကားကို upgrade နှင့်ပင်ပိုမိုမြင့်မားအကွာအဝေးရောက်ရှိဖို့ဒင်္ဂါးပြားကိုစုဆောင်းပါ။ သော်လည်းထွက် Watch - ဘီလ်ရဲ့ရဲရငျ့စှာပွောလည်ပင်းသူတစ်ဦးသည်ဆိတ်သငယ်စဉ်အခါကဖြစ်ဖို့အသုံးပြုသောအရာကိုမရပါ! နှင့်သူ၏ကောင်းသောအဟောင်းဓာတ်ဆီဂြိုဟ်စက်ခေါင်းတိုင်ကအလွယ်တကူလောင်စာထဲက run ပါလိမ့်မယ်။
•⚡ကိုအော့ဖ်လိုင်း Play - အခါတိုင်း & နေရာတိုင်းမှာ Play!
•🚗ယာဉ်များ - 29+ ယာဉ်များ Unlock နှင့်သင့် playstyle များအတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ
• Upgrade 🔧 - သင့်ယာဉ်များ၏အင်ဂျင်ရပ်ဆိုင်းမှု, တာယာ & 4WD Improve
•⛰️ Drive ကို - စာသားအဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြောင်း 28+ အဆင့်ဆင့်
•👍 Optimized - မြင့်အနိမ့် resolution ကိုကိရိယာများပေါ်တွင်ကောင်းစွာကစား
•🛠ဂိုဒေါင် mode ကို - ထုံးစံအစိတ်အပိုင်းများနှင့်သင်၏အိပ်မက်မော်တော်ယာဉ်ကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်မောင်း!
မော်တော်ယာဉ်များ: Jeep, Motocross ဆိုင်ကယ်, နဂါးထရပ်ကား, လယ်ထွန်စက်, hippie ဗန်, onewheeler, Quad စက်ဘီး, ခရီးသွားဘတ်စ်ကား, ပြိုင်ပွဲကားရဲကား, လူနာတင်ကားကမီးထရပ်ကား, ဆီးနှင်းမိုဘိုင်း, စူပါ offroad နှင့်များစွာသောပိုပြီး!
တောင်ကုန်းတောင်တက်ပြိုင်ပွဲကစားရန်အခမဲ့ပေမယ် optional ကို In-app ကိုဝယ်ယူမှုရရှိနိုင်ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုဖတ်ရှုနေသည်ဟုအောက်မေ့လော့, သင်တွေ့ပါစေခြင်းငှါမဆိုပြဿနာများကိုပြုပြင်တာတွေအသစ်သောမော်တော်ယာဉ်များကိုအလုပ်, အဆင့်ဆင့်, features တွေမှာသင်တန်း၏ခက်ခဲရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကယ့်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာကိုသတင်းပို့သို့မဟုတ်မကြိုက်ပါချင်ပါတယ်လျှင်တန်ဖိုးထားခြင်းနှင့် support@fingersoft.com မှဂိမ်းအတူသင်တို့ရှိစေခြင်းငှါမဆိုပြဿနာများကိုနှင့်သင့် device ကိုလုပ်များနှင့်မော်ဒယ်များပါဝင်သည်ကျေးဇူးပြုပြီးချင်ပါတယ်။
* Facebook မှာ: https://www.facebook.com/Fingersoft
* တွစ်တာ: @fingersoft
* Web ကို: https://www.fingersoft.com
* Instagram ကို: https://www.instagram.com/hillclimbracing_official
တောင်ကုန်းတောင်တက်ပြိုင်ပွဲ All rights reserved Fingersoft Ltd ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Hill Climb Racing အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Hill Climb Racing အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Hill Climb Racing အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Hill Climb Racing အား အခ်က္ျပပါ
k2market စတိုး 1 3.84k
Hill Climb Racing ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Hill Climb Racing အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.42.3
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.fingersoft.net/privacy.html
လက်မှတ် SHA1: 9A:A5:2C:C5:C1:EA:64:9B:45:F2:95:61:14:17:B4:B6:DA:63:24:EA
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Toni Fingerroos
အဖွဲ့အစည်း (O): finger
နယ်မြေ (L): oulu
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): fi
Hill Climb Racing APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ